Ampifanaraho ny Apple Watch hahalalanao hoe iza no hovidinao | Avy amin'ny mac aho
Ampifanaraho ny Apple Watch hahalalanao hoe iza no hovidinao
Amin'ny maha mpampiasa tsy mivadika amin'ny marika paoma manaikitra ahy dia manantena ny alatsinainy aho ary afaka manatrika fizarana Keynote vaovao. Na inona na inona lazain'izy ireo, ny andro talohan'izay sy aorian'ny Keynote dia nisy fiatraikany izay Tranonkala an'arivony maro no velomina hiresaka sy hiresaka momba izay lazain'ny olona Cupertino tamin'io andro io.
Araka ny fantatrao, ny andrasana amin'ny Alatsinainy dia ny Apple Watch ary indray mandeha ary ho an'ny rehetra dia ampahafantaro anay ny mampiavaka azy sy raha manana fivarotana fampiharana vaovao ho azy isika amin'ny farany.
Already in lahatsoratra iray hafa teo aloha Nampahafantarinay anao ny fisian'ny pejin-tranonkala iray ahafahanao mitanjozotra kely amin'ny rafitra fiasa izay hampandeha ity famoronana Apple vaovao ity. Mazava fa tsy maro ny hetsika azo atao saingy hitanao ny endrik'ilay rafitra teo amin'ny efijery famantaranandro iray namboarina tao amin'io tranonkala io.
Izahay izao mitondra iray hafa iray hahafahanao manamboatra ny Apple Watch ho avy. Afaka mifidy ianao, voalohany indrindra, izay fitaovana tadiavinao amin'ny vatan'ny fiambenana. Avy eo azonao atao ny misafidy ny karazana tadiny kasainao hapetraka eo amboniny.
Ny pejy resahantsika dia MixYourWatch. Ankehitriny, misy tranokala iray hafa izay andehanany lavitra ary ho hitanao ny fisehoany fampiharana sasany eo amin'ny efijery ny Apple Watch ho avy. Amin'ity tranga ity, ny toerana tokony hidiranao dia ao WatchAware.
Ka raha te hifandray amin'ny Apple Watch vaovao alohan'ny alatsinainy ianao dia ampidiro ireo pejy roa ary ankafizo ny fikiranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ampifanaraho ny Apple Watch hahalalanao hoe iza no hovidinao
Cedar dia hoy izy:
Efa namboariko ny ahy ... Mila an'i El Dorado aho dia efa niantso ny banky hangataka fanitarana ny trosa ... inona ny nerves joer !!!
Valiny tamin'i Cedar
Toa tsy ho ela ny fanavaozana ny MacBooks Air miaraka amina processeur sy sary vaovao
Pebble dia miatrika ny Apple Watch